7 Izindawo Zokuthanda Emhlabeni Wonke | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Qeqesha Ukuhamba Italy > 7 Izindawo Zokuthanda Emhlabeni Wonke
(Kugcine ukubuyekezwa On: 07/06/2021)
Kusukela ezinqabeni zaseYurophu nasemadolobheni amadala asendulo kuya eHong Kong ethokozisayo, lezi 7 izindawo zokuthanda umhlaba wonke zizokwenza uthando lwakho lukhule. Lezi 7 izindawo zothando yizindawo ezilungele isahluko esihle endabeni yakho yothando, nokuvuselela umlingo.
1. Indawo Ethandwa Kakhulu Yothando Lomhlaba Wonke: Paris
Uma ufuna amagama afanayo kusichazamazwi se- “love”, uzothola iParis ibhalwe ngamagama amakhulu. Intelezi yayo engachazeki, ubuhle ebusuku, patisserie, namabala amaningi wezithombe zothando, yenza iParis enye ye 7 thanda izindawo emhlabeni wonke.
Ukuhambahamba endaweni enhle yaseLa Marais, ukulalela umculo wasemgwaqweni, noma ukuba nepikinikini ezindaweni ezinhle kakhulu, IParis iyisibonelo sothando. Yebo, kungahle kungamangalisi ukuthi iParis ihamba phambili indawo yehoneymoon e-Europe, futhi ungacabanga ukuthi zonke izindawo zayo zothando zizobhukwa ngokuphelele. Nokho, lo muzi othandekayo ugcwele amabala, lapho ungakhala khona ngothando lwakho, noma ube nesifinyezo esingenazo izivakashi. IParis ngokungangabazeki idolobha lokugcina lothando, yonke imibhangqwana, kuyo yonke imibala yothingo lwenkosazana.
Izinto Ezithandana Kakhulu Ongazenza EParis
Zulazula eMusee Carnavalet, ukuqabulana eCanal Saint-Martin, futhi ujabulele ipikinikini yezothando esikhaleni esivelele seChamps de Mars.
2. Indawo Engcono Kakhulu Yothando E-Italy: Venice
Ngenkathi iVenice ingenye yamadolobha ahambela kakhulu eYurophu, uzothola izindawo eziningi ezifihliwe, lapho ongabelana khona nge-gelato noma i-pizza. Amabhuloho omuzi azokusa wena nothandekayo wakho emakhoneni endlela eshaywayo, izindlela, nezindawo zokudlela zasendaweni, lapho ongashwabadela khona cuisine Italian, ne-toast ukuthanda iwayini lase-Italy noma i-Aperol.
Usuku oluphelele lwezothando eVenice luzoqala ngokuhlola amabhuloho amaningi. Khona-ke, ungadla i-pizza 2 nojelato. Kunconywa ukushiya ukuvakasha ku- 2 iziqhingi ezinhle eBurano naseMurano, ingxenye yesibili yosuku, ngemuva kokuhamba kwezixuku zezivakashi. Ngale ndlela, iziqhingi niyakuba nazo nonke, for pics zothando.
Izinto Ezithandana Kakhulu Ongazenza EVenice
Zulazula eDorsoduro, indawo yangakini, noma udle eCantina Do Spade, lapho uCasanova ajwayele ukuthatha isidlo sakusihlwa. Khona-ke, ungaba nesidlo sasemini sothando esiqhingini esimangalisayo saseBurano, futhi ujabulele ukugibela i-gondola ekushoneni kwelanga. Ungaqala iholide lakho lothando nge uhambo lwezitimela zothando ukusuka eLondon noma eSwitzerland kuya eVenice.
3. Izindawo Zokuthanda EYurophu: Lake Como
Ilanga liyashona ezintabeni, kubonakala echibini, futhi uhamba no-Along wakho othandekayo Ukuhamba kwabathandi, umkhondo wabathandi eVarenna. Impela uzovuma ukuthi lokhu kwenza ILake Como indawo engathandeki ukukhohlwa yothando okokubalekela ukuthandana 2.
Ngaphezu kwedolobha elihle laseVarenna, Bellagio, kanti iVezio inikeza imibono emangalisayo yeLake Como nezindawo eziningi zothando.
Izinto Eziningi Zothando Ongazenza ELake Como
Jabulela ukuhamba ngothando olukhulu ezintabeni zeLari kuyo yonke indlela eya epikinikini yomlingo eMonte Crocione. Uma ungumbhangqwana othanda i-adrenaline, khona-ke indiza yasolwandle ngenhla kwechibi izovusa lezo zimvemvane!
4. Izindawo Zokuthanda EChina: i-Hong Kong
Modern, kuyajabulisa, futhi othakazelisayo, IHong Kong ingelinye lamadolobha athandana kakhulu emhlabeni. Amabhilidi amakhulu edolobha, neziqhingi, unikeze izindawo ezimangalisayo zokubukwa kwezithombe ezizobamba uthando lwakho. IHong Kong yinhle emini nasemalambini asebusuku, ukushona kwelanga nokuphuma kwelanga, ukunikela ngemisebenzi eminingi yothando, Okwe amaholide okuphumula amabili, noma i-epic adventure, ukuyibeka phezulu 7 thanda izindawo emhlabeni wonke.
Izinto Eziningi Zothando Zenziwa EHong Kong
Usuku oluphelele lwezothando luzoqala ngomkhumbi ozungeze iVictoria Harbour, noma ipikinikini emabhishi anesihlabathi iRepulse Bay. Emini, ungathatha isigaba sokupheka sangasese, bese uqeda ngokukhulisa izibuko zakho ukuze uzithande ekushoneni kwelanga.
5. Thanda Ukuya Emhlabeni Wonke: Austria
Austria, izwe lezinqaba, izingadi ezimangalisayo, namadolobha athakathayo, iyindawo edumile yothando eYurophu. Uma ufuna ukuphunyuka ezixukwini, lapho-ke iHalstatt iyindawo efanelekile engafinyelela kuyo, ngaphezu kokunye uhambo lwezinsuku ezinhle oluvela eVienna.
Izindawo zemvelo ezimangalisayo njenge-Innsbrucker zinikeza ukubukwa okuhle kakhulu kwezintaba nesigodi sase-Austrian, ukunyuka kwezothando. Ngaphezu kwalokho, amadolobha amahle asendulo ayindawo ekahle yezindaba zenjabulo ezake zaba khona ngemuva kwendaba zothando. Nokho, uma ukhetha ukuphunyuka emadolobheni, bese iVienna iphelele impelaviki yothando. Ngaphezu kwalokho, IVienna ingenye ye- izindawo ezinobungani kakhulu be-LGBT emhlabeni wonke, ngakho-ke yemukela yonke imibhangqwana, kunoma isiphi isimo sobudlelwano, futhi ngilinde wena nomunye wakho obalulekile.
Izinto Ezithandana Kakhulu Ongazenza E-Austria
Usuku lokuthandana e-Austria luzoqala nge-strudel yase-Austrian yokudla kwasekuseni ekhefi lendawo. Khona-ke, phuma uhambe ngokuzulazula engadini noma enqabeni yase-Austrian. Ngaphezu kwalokho, uma niyizithandani zemidlalo bese nihamba ngezinyawo ezintabeni zase-Austrian, kuzoba kuhle.
6. Izindawo Zokuthanda Emhlabeni Wonke: ePrague
Petit futhi ebukekayo, IPrague inothando olwesabekayo futhi ibambe indawo yethu 7 izindawo ezinhle zothando emhlabeni. Yebo, kugcwele izivakashi, kepha kunendawo yokubuka eminingi namapaki aluhlaza, ukugwema izixuku zabahambi, futhi usajabulela i- okuhle kwePrague yakudala.
Amabha amancane amancane, amabhuloho amahle kakhulu, futhi indawo yaseMala Strana yizindawo ezilungele ukuthandana. Ngenkathi iPrague ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu eYurophu, kunezindawo eziningi ezifihliwe; indawo ebukekayo yaseMala Strana, futhi upake ngokubukwa kwedolobha, IPalacky Bridge, zimane nje ziyi- ezimbalwa zezothando ezifihliwe.
Izinto Ezithandana Kakhulu Ongazenza EPrague
Ukuhambahamba eMala Strana, ubhiya ngasemfuleni iVltava, idina ngokubukwa kwedolobha, nama-cocktails kubha yeHemingway.
7. Izindawo Zokuthanda Emhlabeni Wonke: Isifunda SaseLake ENgilandi
Lapho indawo igqugquzela izinkondlo zothando zikaWilliam Woodsworth, ke yindawo ephezulu yothando. ngempela, uzobona ukuthi umhlaba weLake eWest England uthandana ngokweqile. Sibonga u 6 iziqiwi zemvelo ezisemaphandleni naseNgilandi, futhi 16 amachibi amahle.
Kutholakala esifundeni saseCumbria, umhlaba wamachibi ungenye yezifunda ezinhle kakhulu eNgilandi. Ngakho-ke, ukuhamba ngezintaba phansi kwamagquma, emachibini nasematheni, kungenye yezinto zothando kakhulu ongazenza emhlabeni. Uzozizwa sengathi unyathela inoveli yomlingo kaJane Austen, lapho uthando ludelela zonke izithiyo.
Izindawo Ezithandana Kakhulu E-Cumbria
Ichibi laseKeswick, ukunyuka okuhle ukuya epikinikini echibini. Ngaphezu kwalokho, Inani eliphakeme likaHelvellyn, futhi impophoma yizindawo eziphupha ngokuphelele ezimbili.
Lezi 7 izindawo zokuthanda izindawo ezinhle kakhulu zokunonga ubuhlobo bakho. Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele ukuphunyuka kwakho kwezothando kulezi zindawo zokuphupha nezijabulisayo.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Zothando Ezi-7 Emhlabeni Wonke” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Flove-destinations-worldwide%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
izindawo uthando LoveDestinations zothando RomanticvacationEurope weddinginEurope
Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe